Step 1: ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အထည်လေးတွေကို ပထမဦးစွာရှာပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အထည်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ထည့်ရန် အကန့်အသတ်ရှိပါသောကြောင့် ကိုယ်လိုချင်သော ရွှေအလေးချိန် (သို့) ဒီဇိုင်း မရှိပါက အချိန်မရွေး Facebook Messenger ကနေ တစ်ဆင့် Customized Order မှာယူနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်လိုချင်တာလေးတွေ့တယ်ဆို “Buy Now” ကိုနှိပ်ပါ။
Account မဖွင့်ပဲလည်း မှာယူလို့ရပါသည်။ Place Order လုပ်ပြီးလျှင် Order Department မှ လူကြီးမင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ပြီး Order Confirmation အား Viber (သို့) Facebook Messenger မှတစ်ဆင့် ပြောပေးပါမည်။
Account ဖွင့်ပြီးလည်း အော်ဒါမှာယူလို့ရပါသည်။ Account ဖွင့်ရန် (သို့) ဝင်ရန် သို့သွားပြီး Registration လုပ်ပေးပါ။ Account ရှိပါက ကိုယ်အော်ဒါတင်ထားတဲ့ Record လေးများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါသည်။
Order မှာယူလိုပါက နာမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ ပေးပို့ရန်၊ Facebook အကောင့်ရှိလျှင် ဦးထုံ Page Messenger မှာ လာ Hi ပေးရန် (သို့မဟုတ်) Viber နံပါတ်ပေးရန်၊ အကယ်၍ Email အကောင့်ရှိလျှင် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Order Confirmation များကို ၂၄ နာရီ မှ ၂ ရက်အတွင်း ကြိုးစားပြီး Confirmation လုပ်ပေးပါသည်။
Customized Order များ မှာလို့ရပါသည်။ အော်ဒါမှာယူတဲ့အခါ ဖုန်း (သို့) အီးမေး (E-mail) ကနေတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ Messenger မှတဆင့် လူကြီးမင်းများ မေးမြန်းလိုသောမေးခွန်းများကို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရန်သူမျိူး၅ပါးအန္တရယ်ကြောင့် တစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ဘောင်ချာပျောက်သွားခဲ့သော်လည်းကောင်း ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ Order မှာယူပြီး Delivery မှတဆင့် Customer ထံရောက်သည်အထိတာဝန်ယူပါသည်။ Online မှ Customer များကို Delivery နှင့်စတင်ပို့ဆောင်သောအချိန်မှစ၍ ပစ္စည်းအပျောက်အရှရှိခြင်း၊ ပစ္စည်းပျက်စီးခြင်းပြဿနာမျိုး ယနေ့အချိန်ထိမတွေ့ကြုံဖူးသေးပါ။
အော်ဒါမှာပြီးလို့ ဆိုင်မှာလာယူမယ်ဆိုရင်ရော ရနိုင်မလား?
Website မှမှာယူထားသောအထည်များကို ပြန်ရောင်း၊ ပြန်သွင်းလို့ရပါသလား?
ဦးထုံရွှေဆိုင်က အထည်ပစ္စည်းအစစ်ဟုတ်/မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
(သို့) Messenger သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါသည်။ ဝယ်ယူပြီးသော ပစ္စည်းများကို ဘောက်ချာနှင့်တကွ ရှင်းပြပါသည်။
ပစ္စည်းမှာယူပြီးလျှင် မည်သည့်အချိန်တွင် ပို့ဆောင်နိုင်သလဲ?
Instock ရှိပါက ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ၂ ရက်မှ ၃ရက်အတွင်း ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ နယ်ဆိုလျှင် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ပို့ဆောင်ရန် အခက်အခဲရှိခဲ့လျှင် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မှ Customer များထံ ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။
ငွေပေးချေမှု နှင့်ပက်သက်၍ ရေးထားသောအကြောင်းအရာ Link မှတစ်ဆင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်းရရှိအပြီး ၂၄နာရီအတွင်း လဲလှယ်မည်ဆိုပါက အလျော့တွက်လက်ခမရှုံးပါ။ ၂၄နာရီကျော်လွန်ပါက ရွှေပေါက်ဈေးနှုန်းထားအတိုင်း ကောက်ပေးပါသည်။
Website တွင် အထည်၏ခန့်မှန်းခြေတန်ဖိုး ထည့်ပေးထားပါသည်။ လက်မှုပညာဖြစ်သောကြောင့် ရွှေအလေးချိန်တွင် အတိုး၊ အလျော့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Place Order လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း Viber တွင် အသေးစိတ်ပြန်လည်ရှင်းပြပါမည်။ ရွှေဈေးအတက်၊ အကျဖြစ်သောကြောင့် အထည်၏တန်ဖိုးကို စရန်ပေးချေသောနေ့တွင်‌ ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
အရစ်ကျဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားပါက ဖော်ပြပါ Link တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Website မှဝယ်ယူထားတဲ့အထည်ကို ဘယ်လိုပြန်သွင်းရမလဲ?
Website မှ ဝယ်ယူထားသောလက်ဝတ်ရတနာများကို ပြန်သွင်းလိုလျှင် ရွှေဈေးအတတ်အကျပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းကွာဟနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အခေါက်ထည်များကို အထည်ပေါ်မူတည်၍ 8000 ဝန်းကျင်အထိကွာဟနိုင်ပါသည်။ 15 ပဲရည်နှင့် 14 ပဲ2ပြားရည်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် အရှိရွှေချိန်အတိုင်း 15000 ခွာကောက်ပေးပါသည်။ ရွှေဈေးအတတ်အကျကြမ်းလျှင် ရွှေဈေးကွက်ပေါ်မူတည်၍ ရွှေဈေးနှုန်းအတိုး၊ အလျော့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဦးထုံရွှေဆိုင်မှအထည်များသည် ပြန်သွင်းသောအခါ ပြန်လည်၍အသုံးမပြုပဲ ပြန်ကောက်ထည်များကို အရည်ကျို၍ Design အသစ်ပြုလုပ်ကာရောင်းချပေးပါသည်။ ပြန်သွင်းလျှင်ရနိုင်မည့်ခန့်မှန်းဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြပါ Link တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ပြင်ပရွှေဖြင့် Customized Order အပ်နှံ့သည့် အထည်ပစ္စည်းများကိုမူ ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်ရှိ ရွှေထည်ပစ္စည်းများနှင့် လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ပြီးမှသာ ဈေးဖြတ်ပေးပါသည်။
အခြားမေးမြန်းစရာရှိပါက Messenger (သို့မဟုတ်)
အမှတ် 528 (မြေညီထပ်)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၂၇ လမ်းနှင့် ၂၈ လမ်းကြား၊
အခန်း (B) 01-05 (မြေညီထပ်)၊ လမ်းမတော်ပလာဇာ (သံဈေးအနီး)၊ လမ်းမတော်လမ်း၊